Fikarohana momba ny firaisana Trangam-panjakan'olo-n'i Nellie Sharp | Karen Frazier sy ny Wellington, Washington Avalanche sy ny lozam-pifamoivoizana - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Naroso & Notadiavin'i: Karen Frazier
Narrative avy amin'i: Karen Frazier
Fiainana taloha momba ny alika maty tsy an-kijanona
Nandritra ny androm-piainako dia mbola nanonofy ny nofinofiko aho. Nanana ireo nofinofiko ireo aho fony aho dimy taona teo ho eo, ary mitranga izany mandraka androany. Mihevitra aho fa iray isan-taona hatramin'io fotoana io. Mahaliana fa maro no mifanaraka amin'ny fisaritahan'ny lamasinina. Izany hoe, manana ny nofiko aho, ary ao anatin'ny 24 ora dia misy ny fihenan-tsasatra amin'ny vaovao.
Toy izany koa no nitranga tamin'ny horohoron-tany. Tsy tadidiko akory hoe firy taona aho no nanomboka ny nofinofy tamin'ny horohoron-tany, ka hoy aho hoe mbola tanora aho. Manana iray na roa isan-taona aho. Tahaka ny fanararaotan'ny lamasinina, manana ny nofinofiko aho ary ao anatin'ny ora 24 dia misy horohoron-tany. Ity lahatsary ity dia nahitana horohoron-tany lehibe tany andrefana, anisan'izany ny horohoron-tany tany Northridge, tany Los Angeles, ny horohorontany 1989 Loma Prieta tany San Francisco ary ny horohorontany XnUMX Nisqually akaikin'i Seattle. Izaho dia tao San Francisco androany talohan'ny horohoron-tany Loma Prieta.
Fiainana taloha momba ny fiainana any Wellington, Washington Avalanche & Train Derailments
Ao amin'ny 2009, misy olona iray miresaka momba ny loza ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'i Etazonia, izay nitranga tao Wellington, Washington any amin'ny faritra avaratr'i Cascade Avaratra amin'ny 1910. Ny lozam-pifamoivoizana dia namafa lalana fiarandalamby roa teo anoloan'ny tarehin'ny tendrombohitra, namono olona farafaharatsiny 96. Ny sarin'ny taorian'ilay fanilihana dia omena etsy ambany. Apetraho eo amin'ny sary ny cursor mba hanitarana azy.
Hatramin'ny fotoana voalohany nahare momba an'i Wellington dia nanintona ahy ny amin'izany. Ny vadiko dia mamaritra azy io ho "faniriana be loatra" amin'i Wellington. Raha ny marina dia nanoratra boky roa momba an'io lohahevitra io aho ary nandany ora an-jatony tany amin'ilay toerana na dia eo aza ny hoe 3 ora miala ny tranoko i Wellington. Toy izany koa, efa niresaka momba an'i Wellington tamin'ny fihaonambe aho, ary koa tamin'ny radio sy fahitalavitra.
Ny fiainan'i Nellie Sharp: niharam-boina tamin'ny Wellington, Washington Avalanche & Train Derailment
Rehefa nanomboka ny fikarohana nataoko tany Wellington aho tamin'ny 2009, dia nanintona ny saiko ny iray tamin'ireo mpandeha lamasinina maty tao anatin'io lavaka io. Ny anarany dia Nellie Sharp ary izy dia 26 taona fony izy maty. Rehefa nahatsapa aho fa nisintona azy dia nanomboka nikaroka an'i Nellie namana iray, Elaine Davison, ary izaho. Noraisinay dimy taona ny fampahalalana rehetra ananantsika amin'izao fotoana izao.
Teraka tany Bloomington, Illinois i Nellie tamin'ny Desambra 1893, izay zandriny indrindra na fito mirahalahy. I George sy Minnie Sharp no ray aman-dreniny. George dia injenieran'ny lalamby nivoaka avy tao Bloomington na Chicago. Ny fianakaviana Sharp dia niaina tany amin'ny toerana maromaro, anisan'izany Missouri, Texas ary Oklahoma. Tamin'ny taona 21 izy dia nanambady an'i John T. McGirl. Nifindra tany San Francisco ireo mpivady ary tao izy ireo noho ilay horohorontany tamin'ny 1906. Nosarahan'i 1910 i Nellie sy i John.
Nellie dia mpitendry mozika nitendry klarineta. Niasa nandritra ny fotoana fohy izy tamin'ny naha-mpiasan-telefaona azy. Mpanoratra ihany koa izy izay nanoratra ho an'ny gazety teo an-toerana sy nanatontosa hetsika toa ny St. Louis World Fair. Golfer koa izy.
Ny Febroary 1910 dia nahita an'i Nellie tany Spokane, Washington niaraka tamin'ny namany, Rtoa Herbert Tweedie. Ireo dia nandeha an-tongotra sasantsasany tamin'ny fiaran-dalamby mba hahafahan'izy ireo manoratra mikasika ny niainany tany amin'ny Wild West ho an'ny gazetin'i McClure. Naka mololo izy ireo mba hijery hoe iza no nandeha tamin'ny lalana.
Tamin'ity fihodinan'ny lahatra ity, Nellie Sharp McGirl dia naratra teny amin'ny Great Northern Railway's No. 25, nitodi-doha nankany Seattle. Tao amin'ny tandavan-tendrombohitra Cascade Avaratra tao amin'ny tanàna antsoina hoe Wellington, ity lamasinina ity, niaraka tamin'ny iray hafa, dia nanjary nitaona tao anaty lanezy nandritra ny sivy andro manaraka, satria nisy oram-panala nanodidina azy ireo. Tamin'ny 1:42 maraina tamin'ny 1 martsa 1910 dia nisy helatra nandriatra ny sisin'ny havoana ambonin'ireo fiarandalamby, izay nahatonga ny avalanche. Ny fiaran-dalamby Nellie dia tao, niaraka tamin'ny fiaran-dalamby faharoa, nofaohina teo amoron'ny tendrombohitra ary napetraka teo amoron'ny renirano Tye. I Nellie dia iray tamin'ireo olona 96 farafaharatsiny novonoina.
Ny tatitra avy amin'ireo tafavoaka velona tamin'ny horohoron-tany dia nanolo-kevitra an'i Nellie niaraka tamin'ny “vahoaka marobe” tao anaty lamasinina. Vondrona iray izy ireo izay hanangona sy hihomehy, hisotro ary hifoka sigara. Ny tatitra sasany dia milaza fa nanampy ny latabatra fiandrasana tao amin'ny trano fisakafoanana eo an-toerana ao Wellington izy, tao amin'ny Hotel Bailets, rehefa nihinana ny sakafony ny mpandeha fiaran-dalamby. Ny sarin'i Wellington talohan'ny avalanche, toa ny niainan'i Nellie dia naseho etsy ambony.
Rehefa novonoina tao amin'ny avalanche i Nellie dia mbola voatanisa ho havana akaiky azy i John McGirl. Nalainy ny vola natolotry ny lalamby mba hahafahan'ny fianakavian'ireo niharam-boina nandevina azy ireo, fa navelany tao Wellington kosa ny fatin'i Nellie. Fa kosa, ny rahavaviny roa dia tonga avy tany Midwest ary nitaky ny fatin'i Nellie. Raha tsy misy ny vola avy amin'ny lalamby dia tsy vitan'ny fianakaviana ny vato lehibe, ka nalevina tao anaty teti-dratsy tsy misy marika i Nellie.
Past Life Parallels eo amin'i Nellie Sharp & Karen Frazier: Mpihira, Golf ary Reporters
Teraka tamin'ny Desambra 1965 aho. Katolika ny raiko ary Protestanta ny reniko. Tsy manaraka fivavahana aho izao. Nankany amin'ny oniversite aho ary nanambady rehefa 21 taona. Nisaraka aho taona vitsivitsy taty aoriana. Toa an'i Nellie, mozika aho. Nellie nilalao klarinety raha mitendry valiha, piano, mandolin, ary valiha. Nellie dia mpilalao golf tahaka ahy koa. Raha ny marina dia efa nilalao golf hatramin'ny fahazazako satria ny raibeko dia mpilalao golf. Toa an'i Nellie, miasa amin'ny maha-mpanao gazety ahy aho ary mpanoratra tsy miankina.
Ny toetran'i Nellie dia nofaritana ho manan-talenta, tsy azo sakanana ary mahatsikaiky mahatsikaiky. Betsaka no namariparitra ny toetrako amin'ny teny mitovy amin'ny taloha nilazalaza an'i Nellie Sharp. Izaho dia marani-tsaina, tena tsara endrika ary matanjaka.
Ny fiainako rehetra, nanonofy ihany koa ny horohorontany. Mora fehezina aho, ary afaka milaza mialoha ny horohoron-tany. Araka ny nomarihina, i Nellie dia tao anatin'ny horohoron-tany lehibe tao San Francisco.
Fiainana ara-batana taloha teo amin'i Nellie Sharp sy Karen Frazier
Ny namako iray dia nandany volana maromaro nanandrana nitady ny sarin'i Nellie Sharp satria liana tamin'ny fifandraisana izy. Vao tsy ela akory izay dia nahita iray izy ary nasehony ahy. Nellie dia teo amin'ny faha-16 taonany teo amin'ny sary (nampiasaina tamin'ny fangatahana fidirana amin'ny oniversite izy io, ary nandeha tany amin'ny oniversite izy tamin'izy XNUMX). Resy lahatra aho fa raha nahita ny sarin'i Nellie i Elaine dia tsy hitovy endrika amiko izany. Azoko antoka fa kisendrasendra fotsiny ny fitoviana hitako teo amin'i Nellie. Izany no nahagaga ahy raha nahita ilay sary aho, ary toa ny renibeko raiko izany. Toy izany koa, ny sary dia nitovy tamin'ny sary hitako ny ahy fony aho mbola tanora kokoa - saingy tsy tadidiko hoe inona izany.
Taorian'ny fikarakarana sasany dia tsapako fa sary avy tamin'ny 22 aho. Hitako ny fitoviana maro misy eo amin'i Nellie sy ireo sary ireo. Ny volontsika dia mitovy loko sy tontolon'ny tarehimarika, ary toa mitovy loko (ny lokoko voajanahary ny tarehiko dia maivana kokoa noho ilay sary mifamatotra ary tsy mijery intsony aho fa izaho dia ao anatin'ny banditry ny 80). Hitako ny fitoviana amin'ny endriky ny maso, ny taolam-paty, ny orona ary ny endriky ny vava.
Ny tantaran'i Karen dia manondro fa izy dia teraka tao amin'ny vatana vaovao indray Nellie Sharp. Na dia nokarohin'i Karen tsy miankina aza dia nandinika ny raharaha niaraka tamin'i Kevin Ryerson aho. Ahtun Re, ilay mpitarika fanahy nampitaina tamin'ny alàlan'i Kevin izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amina marim-pototra marina, dia manaiky na manamafy fa i Karen Frazier dia ny fanambadiana indray ao Nellie Sharp. Ny asa nataoko tamin'i Kevin dia azo jerena ao amin'ny: Fijangajangana ao amin'ny Reincarnation Ryerson-Semkiw
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Nellie sy Karen dia manana rafitra mitovy na taolana. Ny fijery toy izany dia ho tsara kokoa raha toa ka voasambotra ihany izy ireo. Ao amin'ireo sary nasongadina etsy ambony, Nellie dia naka sary mitsiky kely, raha i Karen kosa manana alahelo lehibe.
Ny fiainana taloha talenta: Nellie sy Karen mizara fahaiza-manao ho mpilalao mozika sy mpilalao golf. Izy roa dia samy niasa ho mpanoratra na mpanao gazety.
Ny fiainana any an-dranomasina na ny nofy: Karen dia nanana nofy miverimberina amin'ny fanararaotam-piaramanidina sy horohoron-tany. Nellie maty tao anaty fiarandalamby ary niaina ny horohoron-tany 1906 San Francisco.
Zava-baovao momba ny fanambadiana: Nahasarika olona teo noho eo i Karen, nifanila tamin'ny faniriana mafy, tamin'ny lozam-pifamoivoizana tany Wellington. Tamin'ny fikarohana nataony momba an'io hetsika io dia nahaliana an'i Nellie Sharp, niharan'ny avalanche izy. Ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray dia manintona ny olona amin'ny fiainany taloha ho toy ny "tranga fifandraisana." Ny tranga roa eo amin'ny fiainana taloha dia ny: Tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao any Laurel & Hardy